नमिता दाहाल - कान्तिपुर समाचार
दाहाल ईकान्तिपुरमा प्रशिक्षार्थीका रुपमा कार्यरत छिन् ।
नमिता दाहालका लेखहरु :
लकडाउनमा खेलाडीको चासो ‘फिटनेस’
लकडाउन लम्बिँदै जाँदा खेलाडीहरू पनि झन्डै एक महिनादेखि घरमै छन् । यो फुर्सदलाई पट्यारिलो बन्न नदिन उनीहरू सम्भव भएजति उपाय अपनाइरहेछन् । कोही आफूलाई घरायसी काममा व्यस्त राख्छन् त कोही गीत संगीत सुन्छन्, पुस्तक पढ्छन्, टिभी हेर्छन् ।
२०७६ का 'रेकर्ड ब्रेकर' ५ खेलाडी
कोभिड-१९ को महामारीका बीच २०७६ सालले बिदा माग्दै छ। यो वर्ष नेपाली खेलकुद जगत्‌का लागि सुखद र दुखद दुवै खालको अनुभव रह्यो। यसै वर्ष १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) सम्पन्न भयो।
लकडाउनमा भलिबल प्रशिक्षक भट्टको टिप्स- ‘खानपान र व्यायाममा ध्यान दिनुहोस्’
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरेसँगै खेलकुदका कार्यक्रम पनि बन्द छन् । सधैं अभ्यास र खेलमा व्यस्त हुने खेलाडीले आफूलाई कसरी फिट राख्ने ?
लकडाउनमा कराते प्रशिक्षक मल्लको टिप्स– 'पसिना निस्कने गरी व्यायाम गर्नुस्'
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण रोकथामका लागि सम्पूर्ण खेलकुद कार्यक्रम बन्द छन्। जसका कारण खेलाडी तथा प्रशिक्षक पनि यतिबेला फुर्सदिला बनेका छन्। सधैं नियमित अभ्यास र खेलका साथै कसरतमा व्यस्त हुने खेलाडीले लकडाउनका बेला कसरी आफूलाई फिट राख्ने?
कराते खेलाडीलाई लकडाउनको साथी टिकटक
विश्वव्यापी कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण देशमा लकडाउन घोषणा भएपछि खेलाडीहरु फुर्सदिला बनेका छन् । उनीहरुका लागि फुर्सदको समय बिताउने माध्यम टिकटक बनेको छ ।
एपीएफका खेलाडी पुनः ड्युटीमा
कोभिड १९ को प्रकोपले सम्पूर्ण खेलकुद कार्यक्रम बन्द भएपछि सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का खेलाडी आ–आफ्नो ड्युटीमा फर्किएका छन् ।
क्रिकेट खेलाडी संघ नेपाल र एनसीसीएस ग्रुपले ४ लाख ६२ हजार सहयोग गर्ने
कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि क्रिकेट खेलाडी संंघ नेपाल(सीपीएएन) र एनसीसीएस ग्रुपले सरकारको कोरोना रोकथाम कोषलाई ४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ ।
कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस)को जोखिम नियन्त्रणका संंसारभरका खेलकुद प्रतियोगिताहरु बन्द गरिएका छन् । खेलकुद प्रतियोगिता बन्द भएसँगै खेलाडीहरु पनि फुसर्दिला भएका छन् । फुर्सदको यो समयमा प्राय खेलाडीहरु घरमै सेल्फ आइसोलेसनमा छन् । सरकारले नेपालभर एक साताका लागि लकडाउन गरेपछि सधैं खेलमा व्यस्त हुने खेलाडीहरु यतिबेला घरभित्रै सिमित भएका छन् ।
खेलमा कोरोनाको प्रभाव
कोरोना महामारीका कारण सार्वजनिक सभा समारोहहरु सबै बन्द छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) खेलमा पनि उत्तिकै हाबी भइरहेको छ । संसारभरी नै खेलहरु स्थगित भइरहेका छन् । कोरोना प्रभावका कारण अहिले विश्व खेलकुद जगतमा नै ब्रेक लागेको छ ।
स्वर्ण विजेता महिला भन्छन्- 'अझै महिलालाई हेर्ने नजर बदलिएको छैन'
१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा नेपालले जितेका २०७ पदक मध्ये १०७ पदक महिला खेलाडीका नाममा रहे । अर्थात् यो सागमा पुरुषभन्दा महिला खेलाडीले धेरै पदक हात पारे । १३ औं सागमा महिला खेलाडीहरुले २८ स्वर्ण, ४१ रजत, ३३ कांस्य र टिम खेलबाट ५ पदक जिते । सागमा करातेका जम्मा १९ स्वर्ण पदकका लागि खेल भएका थिए ।